Na Pann San W – Na Pann San
လူစီး မော်တော်ယာဉ်များ အတွက် ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ် မှတ်ပုံ တင်ခ နှုန်းထားများ ဖြေလျှော့ သတ်မှတ်ကြောင်း အသိ ပေြးေ ကညာခြင်း ၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ေ ရးညွှန်ကြားမှု ဉီးစီးဌာန သည် COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုများကို ကုစားသည့် အနေဖြင့် လူစီးမော်တော်
ကိုဗစ် ကာလမတိုင်မီအချိန်က ကျူရှင်သင်တဲ့ အပေါ် တိုင်ကြားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပြုလုပ်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ကာ အရေးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ ကျူးလွန်တဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်မူတည် ချမှတ် တာဖြစ် ပြီး ကျောင်းသားအချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ ကျူရှင်သင်တာ မှန်ကန်ရင် ကနဦး အဖြစ်စာနဲ့သတိပေးပြီး ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားအပေါ် ပြင်းထန် တဲ့
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို အောက်တိုဘာလ ကစပြီး အလုံးအရင်း စတင် ထိုးနှံပေးသွားဖို့ ရုရှား ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန က စီစဉ်နေကြောင်း သိရ ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး မစ်ခေးလ် မူရက်ရ်ှကို က ပြည်တွင်းဖြစ် စမ်းသပ် တီထွင်ထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေအတွက်
နိုင်ငံ အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ကူးစက်ခံ ရမှု ကို အတည်ပြုပြီးနောက် ၄ လ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ် aသာ် လည်း ‌လက်ရှိ တွင် သေဆုံးသူ ၆ ဦး နှင့် ကူးစက်ခံရသူ ၃၅၁ ဦး သာ ရှိပေသေးသည်။ ဤ သည် ကို ကြည့်ချင်း
မြောက် ကို ရီးယား နဲ့ ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ် လို့ သံသယ ရှိရတဲ့ ဟက်ကာတွေဟာ အမေရိကန် အာကာသနည်း ပညာ နဲ့ စစ်လက်နက် ကုမ္ပဏီတွေ ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့ တယ် လို့ လုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီ McAfee က အကဲဖြတ် စစ်တမ်း ကို
တရုတ်က သူပိုင် ပါတယ် လို့…မတရားကြေငြာထား တဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် မှာ အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စု က ၂ စုတောင်မှရောက် ရှိနေ ပါပြီ ။ U.S တို့ ရဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်စု တစ်စု မှာ ၁. လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး ၂.
ကမ္ဘာကြီး သမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့ နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး သမိုင်းကြောင်း ပြောင်းလဲဖို့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ကျောက်စာထဲ ကိုယ့်နာမည် ရေးထွင်းဖို့လိုသည်( လင်းယုန်ကြီး ပင်လယ်ပြင်မှာ နဂါးဖမ်းပွဲကနေ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကို တဆစ်ချိုး ပုံဖော်ပြောင်းလဲမှုကြီး)
ကမ္ဘာတစ်ခု သမိုင်း တစ်ခု ( သို့ ) သမိုင်း မှတ်တိုင်ကျောက်စာ ထဲ ကိုယ့်နာမည် ရေးထွင်း ဖို့ လိုသ ည် နဂါးပင်လယ်ထဲမှ လင်းယုန် တောင်ပံ ခတ်သံ တရုတ် ဟာ သူ့နိုင်ငံက ဘိန်းစစ်ပွဲ နဲ့ ဖျက်စီးခံ ထားရတာတောင်မှ ၊ ရတာ ကို
တောင်ကြည့် ရ မြောက်ကြည့် ရ ဘဝ နဲ့ …မလုံ မခြုံ ဖြစ်နေပြီဆို မှတော့..သာကော ဘာဆက်လုပ် မလဲ..?
တောင်ကြည့်ရ မြောက်ကြည့်ရ ဘဝ့  …မလုံ မခြုံ ဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့.. နိဂုံးချုပ်ပြီး အဆုံးသတ် ရမဲ့ဘဝ ကိုမရောက်ခဲ့ရင်တောင်….ကမ္ဘာကြီးလ ည်း အနည်းနှင့် အများအေးချမ်းသွား မှာ ဖြစ်သလို…ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင် ငံအတွက်လည်းနစ်နာမှုတွေ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ နဲ့ စစ်ပွဲတွေ..အသင့်တင့် လျော့သွားနိုင်သ လို…အာဏာရူးတွေလည်း ငြိမ်သွားနိုင်တယ် လို့တွက်ထား မိတယ်။ ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတကာ ကို
အရှေ့တောင် အာရှသားများ ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ကို ခံနိုင်ရည် ရှိနသေလား ( သို့ ) အနုမာန အယူအဆ
ဗီယက်နမ် လို အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေ ဟာ ကိုဗစ် ရောဂါပိုးခံနိုင်ရည် ရှိနေ သလား…. အာရှ မှာ ရှိတဲ့ သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေဟာ SARS နဲ့ဆင်တူတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိ လူထုကြား မှာ Covid-19 နဲ့ပတ်သက် လို့ ရောဂါပိုးခံနိုင်ရည်များ ရှိနေမလားဆိုတဲ့ စူးစမ်းမှုပြုလုပ်နေကြ ပါတယ်။ သဘောကတော့ ဗီယက်နမ်လို